Filter ↓ • Sort ↓ • All (3,363) • Translated (261) • Untranslated (3,102) • Waiting (0) • Fuzzy (0) • Warnings (0) • Current Filter (50)
Tus Toolbar marka la eegayo website-ka	 Details
Tus Toolbar marka la eegayo website-ka
2011-12-31 09:10:18 UTC
Xasuusnow, marka aad howshaada dhamaysid, in aad dhag siisid batoonka Ku Dar Isticmaale Cusub oo ku yaal dhanka hoose ee shaashaddaan.	 Details
Xasuusnow, marka aad howshaada dhamaysid, in aad dhag siisid batoonka Ku Dar Isticmaale Cusub oo ku yaal dhanka hoose ee shaashaddaan.
2011-12-31 11:52:59 UTC
Lifaaqid Faylal	 Details
2011-12-31 12:04:06 UTC
Doorarka Isticmaalaha	 Details
2011-12-31 12:05:05 UTC
Waa sidaan muuqaalka guud ee doorarka kala geddisan ee isticmaalaha iyo oggolaanshaha la socda mid kasta:	 Details
Waa sidaan muuqaalka guud ee doorarka kala geddisan ee isticmaalaha iyo oggolaanshaha la socda mid kasta:
2011-12-31 12:05:26 UTC
Si aad ugu dartid isticmaale cusub webkaaga, buuxi foomka shaashaddaan ka muuqda oo dhag sii batoonka Ku Dar Isticmaale Cusub ee yaalla dhanka hoose.	 Details
Si aad ugu dartid isticmaale cusub webkaaga, buuxi foomka shaashaddaan ka muuqda oo dhag sii batoonka Ku Dar Isticmaale Cusub ee yaalla dhanka hoose.
2011-12-31 12:06:38 UTC
Rukuntayaashu wax akhriyi karaan faallooyinka/faalloon karaan/heli karaan dhambaal-wareedyada, iwm. laakiin ma abuuri karo dhigaalka caadiga ah ee webkaan.	 Details
Rukuntayaashu wax akhriyi karaan faallooyinka/faalloon karaan/heli karaan dhambaal-wareedyada, iwm. laakiin ma abuuri karo dhigaalka caadiga ah ee webkaan.
2011-12-31 12:25:33 UTC
Qoraayadu waa faafin karaan maamuli karaanna qormooyinkooda, waxayna rari karaan faylal.	 Details
Qoraayadu waa faafin karaan maamuli karaanna qormooyinkooda, waxayna rari karaan faylal.
2011-12-31 12:39:38 UTC
Waa la hagaajin waayey miiska %1$s. Khalad: %2$s	 Details
Waa la hagaajin waayey miiska %1$s. Khalad: %2$s
2011-12-31 07:39:59 UTC
Naqshadda shidani way cilladaysan tahay. Waxaa lagu noqon naqshadda asliga ah.	 Details
Naqshadda shidani way cilladaysan tahay. Waxaa lagu noqon naqshadda asliga ah.
2011-12-31 08:39:35 UTC
Hagaajintii waa la dhammeeyey. Fadlan ka masax laynka soo socda faylka wp-config.php si aad uga fogaatid in baalkaan ay adeegsadaan isticmaalayaal aan loo ogolaan.	 Details
Hagaajintii waa la dhammeeyey. Fadlan ka masax laynka soo socda faylka wp-config.php si aad uga fogaatid in baalkaan ay adeegsadaan isticmaalayaal aan loo ogolaan.
2011-12-31 08:45:41 UTC